युएसबी-डैक-प्रवर्धक: अवलोकन, विशेषताहरु, प्रकार र मूल्यांकन
जीवनको कुनै पनि प्रक्रिया, यो एक कार वा पकाउने ड्राइभिङ गर्नुपर्छ कि, दुवै एमेच्योर र व्यवसायीक सावधान छन्। सावधान र व्यापार मा उच्चतम गुणस्तर लागि तिर्खा। संगीत को लागि नै जान्छ। त्यहाँ फोन संग पोको बस सस्ती हेडफोन मा माधुर्य आनन्द गर्नेहरू, र कसैले सुनको खण्ड संग महंगा एम्पलीफायरों र केबल किन्छ। तिनीहरूले ध्वनि मा कमीकमजोरी लागि देख हरेक टिप्पणी गर्न ध्यान र प्राण एमपी -3 ढाँचा घृणा गर्छ। Alas, निरन्तर आफ्नो मनपर्ने श्रवणशास्त्र संग घर मा बस्न काम गर्ने छैनन्, र तपाईं चाहनुहुन्छ राम्रो गुणस्तरको संगीत सुन्न। यी उद्देश्यका लागि, पोर्टेबल एम्पलीफायरों जो जसबाट उच्च आवाज गुणस्तर प्राप्त, फोन जडान गर्न सकिँदैन, बनाइयो। मान्छे को यस कोटीमा आजको लेख समर्पित छ। हामी हेडफोन एम्पलीफायरों र संकुचित स्पिकरहरूमा पोर्टेबल USB-डैक को एक सिंहावलोकन प्रस्ताव।
रचनात्मक ध्वनि ब्लास्टर
रचनात्मक उच्च गुणस्तरीय अडियो उपकरण को प्रशंसक खुसी पार्न एक पटक भन्दा बढी छ, र यो दिन त्यसो गर्न जारी छ। एउटा अद्यावधिक युएसबी-डैक हेडफोन एम्पलीफायर र एउटा सानो स्पिकर - ब्लास्टर E5 आवाज। यो मोडेल एक ट्रयाक्टर-कोर डीएसपी-प्रोसेसर र ध्वनि बिन्दु समायोजन गर्न स्वामित्व तुल्यकारक संग सुसज्जित छ। कम्प्युटरमा जडान हुँदा यसको चालक, मिक्सर र सबै धर्काहरू को "audiophile" यति रुचाउनु हो भनेर अन्य Delights संग पूर्ण-fledged ध्वनि कार्ड रूपमा ब्लास्टर कार्यहरु आवाज। यो डैक पनि हेडसेट रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो अन्त गर्न, यो दुई माइक्रोफोन र ब्लुटुथ-मोड्युल निर्माण गरेको छ। यो, प्रसंगवश, एक शक्तिशाली "भर्नको" संग सुसज्जित छ जो छैन रचनात्मक, को मात्र मोडेल छ, तर पनि राम्रो रूपबाट चालक दावा। तसर्थ, आवाज गुणस्तर आवश्यक छैन बारे, यो तपाईं $ 200 को लागत विचार विशेष गरी जब सभ्य भन्दा बढी छ चिन्ता।
रचनात्मक अघिल्लो विकासक्रम अक्सर व्यक्तिगत घटक गुणस्तर देख बिना कम्पनीको ईन्जिनियरहरु बढि सबै उपकरणहरू मा Cram गर्न प्रयास, तर छन् भन्ने तथ्यलाई लागि दोष छन्। यो पोर्टेबल USB-डैक एम्पलीफायर सुविधा सेट को मामला मा एक अपवाद छैन, तर एउटा ठूलो caveat गुणवत्ता संग। ग्राहकहरु यसलाई बुझ्न र यसको मूल्य खण्ड मा कम्पनी को सबै भन्दा राम्रो विकास नाम। आलोचकहरु IXBT मूल्य र गुणस्तर को ध्वनि ब्लास्टर E5 सिद्ध संयोजन भनिन्छ।
Ironically, घटनाहरु को एक यस्तो पाठ्यक्रम प्रयोगकर्ता प्रभावित। दर्शक र व्यावसायिक संगीतकार देखि दबाव यसको काम गरेको छ। रचनात्मक ईन्जिनियरहरु हदसम्म आफ्नो उपकरण अनुभवसँग पुनः परिभाषित र एक सफल उत्पादन सिर्जना गर्नुभएको छ। नकारात्मक समीक्षा आवास मात्र डिजाइन छोयो। हेडफोन र स्पिकर लागि USB-डैक एम्पलीफायरों यी प्रकार सामान्यतया संकुचित र Ergonomic छन्।
मिश्रित सफलता संग चिनियाँ कम्पनी OPPO ध्वनि वा स्मार्टफोन कि, नयाँ दिशामा आफूलाई खोज्छ। स्मार्टफोन तिनीहरूले तरिका निर्दिष्ट गरिएको छैन, तर ध्वनि ठीक मामलामा। OPPO हा-2 - न एक वास्तविक "audiophile" बाह्य USB-डैक एम्पलीफायर छ कि सबै भन्दा। यो ग्याजेट मा डैक भूमिका खेल्छ मोबाइल डीएसपी-प्रोसेसर ESS Sabre32 9018. यो आफ्नो तरिका, केवल महंगी एम्पलीफायरों र अन्य नमस्ते-अन्त प्रविधि फेला को सबै भन्दा राम्रो प्रोसेसर छ। रेकर्ड डाटा - यो केवल आधा युद्धमा छ। चिनियाँ ईन्जिनियरहरु को असम्भव गरेको र कुनै पनि उत्पादन नै श्रेणी मा ब्रान्डहरु प्रतिस्पर्धा सक्छ रूपमा आवाज बनाउन छन्। यो OPPO मा तुरुन्तै धातु को शीर्ष मा एक छाला आवरण संग प्रतिस्पर्धा बाट बाहिर खडा गर्ने एक कम्प्याक्ट र स्टाइलिश डिजाइन सबै "भराई" फिट। यो एक शङ्का सबै भन्दा राम्रो चिनियाँ उपस्थिति युएसबी-डैक-एम्पलीफायर बिना छ।
व्यवसायीक को राय पुष्टि र townsfolk। OPPO हा-2 - कक्षाकोठामा सबैभन्दा coveted ग्याजेट। धेरै परीक्षण दुवै सञ्चालन गरिएका छन्, बजेट उपकरण मा, र स्तम्भहरू नमस्ते-अन्त-वर्ग। को जूरीको फैसला नै थियो: यो लिन आवश्यक छ! उच्च गुणस्तरीय ध्वनि को प्रशंसक गहिरो हुनत यो यस्तो शानदार सफलता आशा थिएन, यो क्षेत्र मा OPPO सञ्चालन समय संग imbued छ। एक आसान काम - को डैक ESS Sabre32 9012 गठन के कम्तिमा केही समझ गर्नेहरूलाई, इन्जिनियरहरूले यो प्रोसेसर रूपमा उनीहरू खेल्न प्राप्त किनकी, OPPO काम मूल्यांकन र उनको virtuosity भनिन्छ। यो नै CPU मा चलिरहेको, चिनियाँ शिल्प को सामान्य मन नपराइएको पुष्टि गर्छ, तर बिल्कुल फिक्का र अनिच्छुक ध्वनि छुटकारा।
जापान देखि अभिवादन। DENON DA-10 - को बढ्दो सूर्य को युएसबी-डैक एउटा एम्पलीफायर को एक विशिष्ट प्रतिनिधि। कम्पनी को अन्य मोडेल मामला छ को रूप मा, एम्पलीफायर चिप तिवारी PCM1795 को हृदय भएको छ। चिप विधि 192 kilohertz को एक आवृत्ति मा एक एनालग ध्वनि रूपान्तरण गर्न नाडी-कोड-मडुलन को सक्षम छ। आवास एक सजावटी एल्यूमीनियम आवेषण संग प्लास्टिक बनेको छ। केही रोचक पनि सरल र पनि एक बिट स्वाद नभएको देखिन्छ। र यो क्षति गर्न प्रतिरोध लागि खराब छ।
ध्वनि लागि जाँदा, त्यसपछि सबै कुरा धेरै राम्रो छ। ASIO-चालक पूर्ण सेट गरिएको छ। यो उपकरण अलिकति स्कोप मा सीमित छ र यसको मुख्य कार्य, नमस्ते-अन्त-वर्ग देखि अन्य मोडेल ताकि soundly संकलित छैन हुनत यो प्रतियोगिता भन्दा धेरै राम्रो copes, र यो कम्पनी DENON केवल प्रशंसाको लागि।
मालिक एम्पलीफायर व्यावसायिक आलोचकहरु शब्दहरू पुष्टि गर्नुहोस्। DENON DA-10 धेरै सरल छ, तर यो विश्वसनीय र प्रयोग गर्न सजिलो छ। युएसबी-डैक-एम्पलीफायर को ध्वनि अक्सर महंगा उपकरणहरू त्यस तुलना गरिएको छ। यसबाहेक, धेरै एकदम गम्भीर DENON अक्सर जित्छ जहाँ एक टकराव तिनीहरूलाई राख्नु। सदस्य पनि एक संभावित खरीदार को निर्माता र एप्पल प्रेम लागि चासो उल्लेख गरे। स्मार्टफोन लागि खल्ती र iPhone र आईप्याडका लागि केबल एक सेट एक ठूलो दुई-टुक्रा मामला को एम्पलीफायर समावेश छ। यस्तो उपकरणहरू सामान्यतया स्मार्टफोन र हेडफोन मध्यम वर्ग संग ठ्याक्कै प्रयोग गरिन्छ कि प्रदान मानन सकिन्छ प्याकेजिङ्ग DENON DA-10 सफल रूपमा।
अर्को चिनियाँ। यो रूपमा ध्वनि को मामला मा प्रभावशाली छैन। हो, यो DENON DA-10 मा रूपमा, एउटै चिप सेट गरिएको छ, तर ध्वनि, छ हाय, छैन एक। साँच्चै, यो FiiO E18 छैन आफ्नो प्रतियोगिहरु रूपमा "रसदार" को रूपमा छ सुनिन्छ, तर अन्यथा यो उत्कृष्ट छ। आफ्नो आँखा परिहाल्छ कि पहिलो कुरा - डिजाइन। बाह्य डिजाइन साँच्चै प्रभावशाली छ। एकाइ मामला को फलाम धातु बाट सम्पूर्ण बनेको छ।
तर, त्यो धेरै पातलो थियो र सजिलै उदाहरणका लागि, जिन्स एक खल्ती मा फिट। हरेक विवरण, पनि सानो, सुन्दर र विश्वस्त देखिन्छ। केही creaks र crunches। एक शब्द - पूर्ण। यहाँ मात्रा समायोजन गर्न एक पाङ्ग्रा को रूप मा एक स्वामित्व संयन्त्र, यन्त्र पनि अधिक शान दिएर प्रयोग गर्छ।
सामान्य मा, अपेक्षित रूपमा, अधिक हैरान डिजाइन समाधान, बरु ईन्जिनियरिङ् भन्दा भन्दा ग्याजेट र व्यावसायिक आलोचकहरु को मालिक। यो मोडेल देख, धेरै केही मानिसहरू यो प्रतियोगिता धेरै अलग छैन किनभने, ध्वनि बताउनुभयो। यो उहाँले खराब छ भन्ने होइन, त्यो अरू सबैलाई रूपमा बस नै छ। थप ध्यान कि FiiO E18 एप्पल गरेको उपकरणहरू काम गर्दैन भन्ने तथ्यलाई कहाँ योग्य हुनुहुन्छ। प्रवर्धक एन्ड्रोइड आधारित फोन को लागि विशेष विकास, र तिनीहरूलाई कसरी चार्ज गर्न थाह छ। हो, यो सिर्फ छैन ध्वनि एम्पलीफायर, तर पनि ध्वनि कार्ड र एक स्मार्टफोन लागि ल्यापटप ब्याट्री छ। जे भए पनि, आफ्नो दर्शक पहिले नै शक्ति पाउन, र तपाईं अधिक छ के निर्णय छ: ध्वनि वा डिजाइन।
उद्यम क्राफ्ट जाओ डीएपी BXD
तर यो केवल एक एम्पलीफायर र निर्माता छैन। र यो धेरै अनौठो र कहिलेकाहीं भयावह छ। का कि "हुड" अन्तर्गत तथ्यलाई, कम से कम समस्या सुरु गरौँ। असामान्य निर्णय, तर सहन सकिने, कुनै एक धेरै दुखी छैन - त्यसपछि हामी PCM5100A ड्राइव। एक समय-परीक्षण र राम्रो-मनपराएका शक्ति, महंगा अडियो उपकरण नमस्ते-अन्त-वर्ग को एक frequenter - संलग्न MAX9722A हेडफोन लागि एम्पलीफायर रूपमा। अर्को केही विरोधाभास थाल्छन्।
पहिले, यन्त्र यूएसबी पोर्ट छ, तर यो समाक्षीय पर्छ वा अप्टिकल केबल पक्कै प्रयोग गरिनेछ लागि खेलाडी, यो जडान गर्न सक्दैन। दोस्रो, एम्पलीफायर कन्फिगरेसन मुद्रित सर्किट बोर्ड को मद्दतले बाहिर छ। म अर्थ, तपाईं एम्पलीफायर को दर कारक परिवर्तन, मामला खोल्न र कार्ड एक र Jumpers र को उलटफेर विस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। समाधान, lego पर्याप्त प्ले छैन धेरै अपरंपरागत र स्पष्ट वफादार प्रशंसक को लागि बनाएको छ।
यो प्रशंसक धेरै बाहिर गरिएका रूपमा। प्रेमीहरूको संगीतको संसारमा प्रवेश गर्न चाहने, साँच्चै अनौठो विकास रूपमा "अङ्कुसे हालेर"। प्रयोगकर्ताहरूले यो सुविधाको देखि टाढा छ भनेर बुझ्न, तर घर-हुर्केका ईन्जिनियरहरु र इलेक्ट्रनिक्स संग जीवित मान्छे दुवै आकर्षित कि रोमान्स एक प्रकारको यो डिजाइनमा छ। पक्कै पनि यो र आफ्नो बाजी राख्न। शायद आधुनिक उपकरणहरू मा उपस्थित यस्तो austerity। धेरै को लागि, यो ताजा हावा को एक सास जस्तै हो। को एम्पलीफायर केही मालिक भ्रमित कि मात्र कुरा - निर्माता, र वास्तविक द्वारा यसो छन् विशेषताहरु को अन्तर। र यो आफ्नो देखावटी को निर्माता, रूपमा यो अक्सर हुन्छ भनेर पनि वास्तवमा हो। एकदम विपरीत। परीक्षण गर्ने एम्पलीफायर उपकरण VentureCraft द्वारा बोली भन्दा अझ राम्रो सामना गर्न भनेर देखाएका छन्। यो वास्तवमा एक दर्जन या त संभावित खरीदारों डराएका कि संभावना छ।
यो, सायद, सबै कुरा। प्रस्तुत मोडेल माथि युएसबी-डैक एम्पलीफायरों आज पनि खरीद लागि गम्भीर छलफल गर्न सकिन्छ, जो पाँच सुन, छन्। सबैभन्दा कक्षा रोचक थिए: रचनात्मक ध्वनि ब्लास्टर र OPPO हा-2। पहिलो एम्पलीफायर प्रसन्न (पहिलो पटक) उपकरणको क्षमताहरु र यो प्रयोगकर्ता दिन सक्छ भन्ने आवाज गुणस्तर बीच एक योग्य रकम। दोस्रो प्रभावशाली अविश्वसनीय उन्नत प्राविधिक उपकरण र सुन्दर डिजाइन। यसलाई पहिलो स्थानमा ध्यान गर्नुपर्छ यी दुई मोडेल छ। तपाईं सुरक्षित गर्न चाहनुहुन्छ भने, रचनात्मक देख बच्चा, एक प्राथमिकता रूपमा भने सबै एउटै, यो OPPO को मोडेल मा raskosheltes आदेश छैन। दुवै अवस्थामा, तपाईं पछुताउनु छैन।
HTC (हेडफोन): अवलोकन, प्रकार, सुविधा र मालिकको समीक्षा
लगाइँदै ट्रांजस्टर - यो के हो? प्रकार, मापदण्डहरु र ट्रांजस्टरहरुको विशेषताहरु, चिह्नों
"शुभंकर" - यो एक वास्तविक fashionistas के चाहनुहुन्छ छ!
Peugeot 107 - समीक्षा र सकारात्मक सम्भ्काउनु skeptics
केटाहरू र बालिका लागि झाड बच्चाहरु: चयन गर्न कसरी
होटल चौधरी ऋण होटल3* (भियतनाम, Nha Trang): समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
Overalls जाडो CHICCO - न्यानो, विश्वसनीय, आधुनिक
प्लास्टिक विन्डोज सरोटोभ